China TCT gomba saha, gomba chibooreso, simbi simbi mugomba saha, yakasimbiswa carbide chibooreso, UNIKA isina simbi chiwanikwa chiwanikwa gomba saha fekitori uye vagadziri | Boda
TCT gomba saha, gomba chibooreso, simbi simbi mugomba saha, simende carbide chibooreso, UNIKA isina simbi chiwanikwa chiwanikwa gomba saha
BOSENDA yemhando yepamusoro TCT gomba macheka / TCT gomba chibooreso chinocheka simbi kunge madhaka, ine yakapinza uye yakasimba uye yakasimba kushanda pamwe nekukurumidza kuvhura, inopfeka yakasimba kuramba mukugadzirisa.
Iine tekinoroji yepamberi, uye chiwanikwa- cheki-musoro, izvo zvinoguma nekushomeka kudzvinyirira uye yakakwirira kuvhura kushanda panguva yekushanda. Kukuya nzvimbo yekumisikidza chibooreso, kunyatso kumisa pamberi pekuchera, izvo zvinove nechokwadi chekukasira, nekukurumidza uye kwakaringana kuchera panguva yebasa. Kugadziridza dhizaini yechip kubvisa groove kuti ive nechokwadi chekubvisa chip uye kunyatso kudzivirira marara anovharira. Iyo anti-pitikoti katatu inobata, yakabata yakasimba mukushanda maitiro, kwete nyore kutsvedza, inogonesa chengetedzo uye yepamusoro garandi mukushanda mashandiro.
TCT yakavharwa carbide hole opener inogona kuchera maburi pane yakajairwa simbi, ndiro yesimbi simbi, isina simbi ndiro uye simbi yakakandwa. Iyo yekucheka ndiro ukobvu ndeye 5mm, uye iyo yekucheka mucheto inogadzirwa yemhando yepamusoro tungsten, cobalt uye vanadium alloy. Inogona kutema ese marudzi esimbi-simbi, simbi nhema uye isiri-simbi, kunyanya kune inotonhora uye inopisa simbi uye isina simbi ndiro.
BOSENDA yemhando yepamusoro TCT Hole Saws inogona kushandiswa kuchera pane simbi isina simbi, simbi, alloys yealuminium uye zvakasiyana siyana zvisina kujairika simbi zvinhu.
Chigadzirwa chakatemwa kubva pa12-200MM, zvinoenderana nezvinhu zvekugadzirisa uye zvakatemwa zvechigadzirwa, ndapota sarudza iyo yakakodzera nhamba yekumukira.
Tarisa kutendeseka kwegomba rekuchera usati washandisa;
Sunga iwo mativi epasi paunenge uchiisa iyo yekuboora mugomba remagetsi;
Chengetedza kukoshesa kwegomba rekuchera uye kumeso kunoshanda kana uchishanda;
Shandisa simba diki pakutanga kwekuboora, uyezve wedzera simba nenzira kwayo mushure mekumira;
Paunenge uchishanda, kutenderera hakufanirwe kunonoka kudzivirira kuti banga rirambe rakanamirwa;
Kana nzvimbo yekuboora iri kuchera muchinhu, hazvina kukodzera kushandisa simba rakawandisa kuti udzivise banga rejinga;
Kana uchichera uchienderera mberi, kutonhora kutema fluid kunonzi kushandiswa.
Pashure: HSS mugomba saha, simbi gomba saha, simbi gomba saha, mhando yepamusoro HSS kumhanya simbi chibooreso zvishoma, isina simbi gomba saha
Zvadaro: Kuveza huni saha, gypsum bhodhi gomba saha, PVC ndiro gomba saha, huni gomba saha, huni chibooreso, PVS chibooreso
Diamond girazi zvedongo saha, girazi chibooreso, girazi hol ...